Man City Oo Barbaro Gool La’aan Ah La Soo Gashay Crystal Palace, Goolhaye Ederson Oo Rekoodhe Badbaadiyay Daqiiqadihii Ugu Danbeeyay Iyo Afar Ciyaartoy Oo Dhaawacyo Halis Ahi Soo Gaadheen. – GOOL24.NET
Man City Oo Barbaro Gool La’aan Ah La Soo Gashay Crystal Palace, Goolhaye Ederson Oo Rekoodhe Badbaadiyay Daqiiqadihii Ugu Danbeeyay Iyo Afar Ciyaartoy Oo Dhaawacyo Halis Ahi Soo Gaadheen.
Kooxda Crystal Palace ayay maryo dhiigleh kala furteen kooxda hogaanka Premier league haysa ee Manchester City iyada oo kulan laysku daalay ay dhibcaha ku qaysadeen. Manchester City iyo Crystal Palace ayaa afar ciyaartoy ku waayay kulankan iyada oo Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne ay dhaawacyo soo gaadheen halka Jason Puncheon iyo Scott Dann ay dhibane u noqdeen kulankan.
Manchester City ayaa nasiib ku lahayd in goolhaye Ederson uu daqiiqadihii ugu danbeeyay rekoodhe ka badbaadiyay si uu u sii ilaaiyo rekoodhka guuldaro la’aanta kooxdiisa balse Man City ayaa laga soo gabagabeeyay in guulihii xidhiidhka ahaa ee ay ku soo jirtay.
Manchester City ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo doonaysay in ay soo gaadho guushii 19 aad oo xidhiidh ah isla markaana uu Guardiola barbareeyo rekoodhkii abid ee guulaha xidhiidhka ah ee shanta horyaal ee Yurub ugu dheeraad oo uu Bayern Munich hore uga soo dhigay waxayna sidoo kale City isha ku haysay in ay 17 dhibcood ku qbato hogaanka Premier League balse Crystal Palace ayaa iska caabin layaableh kala hortimid.
Daqiiqadii 8-aad: Crystal Palace ayaa fursad fiican heshay kadib markii uu Christian Benteke ayaau dhawaaday in uu hogaanka ugu dhiibi karay fursad fiican isaga oo goolhaye Ederson uu kubad ku garaacay Mangala, meel dadab ah ayey taalay balse kubadii uu goolka aadiyay xidiga reer Belgium waxey ku dhacday Mangala.
Daqiiqadii 12-aad: Van Aanholt ayaa isku dayay inuu shabaqa Citizens gaaro markii uu kubad aan dhulka dhicin ku tuuray goolka City, daafac ayey ku dhacday ugu dambeyntiina waxaa iska saaray Ederson.
DAQIIQADII 20 AAD Crystal Palace ayay dhibaato xoogani soo food saartay kadib markii uu dhaawac halis ahi soo gaadhay Scott Dann kaas oo isku dayay in uu De Bruyne kubbad ka joojiyo wuxuuna awoodi waayay in uu u adkaysto xanuunka hayay iyada oo garoonka laga dhex qaaday waxaana kaydka ka soo baxay Martin Kelly.
DAQIIQADII 23 AAD Manchester City ayaa markeeda dhibaato dhaawac la kulantay waxaana isaga oo oohinta xejisan waayay garoonka ka baxay da’yarka ree Brazil ee Gabriel Fernando de Jesus kaas oo uu dhaawac xanuun badani soo gaadhay waxaana kaydka ka soo baxay Sergio Aguero.
Daqiiqadii 28-aad BIRTA GOOLKA! Sergio Aguero ayaa ku dhawaaday inuu hogaanka u dhiibo Citizens markii uu kubad joog sare ah goolka Eagles uu ku tuuray waxayna kubbadu ku sii dhacday difaaca Palace,balse darbadiisa ayaa birta goolka ka soo booday.
Manchester City ayaa cadaadis wayn kala kulmaysya kooxda ay martida u ahayd ee Crystal Palace oo waliba si layaableh kubbada ula qaybsatay kooxda Guardiola waxaana sii adkaaday fursadihii goolal lagu dhalin lahaa taas oo keentay in qaybtii hore ee ciyaarta babraro gool la’an ah lagu kala nastay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Manchester City hawlgal wayn ugu jirtay in ay jabiso iska caabinta wayn ee ay kooxda Crystal Palace kala hortimid balse sidoo kale Eagles ayaa raadinayay qaabkii ay ku gaadhi lahaayeen shabaq Sky Blues si ay xaalada ugu adkeeyaan.
Daqiiqadii 57-aad: Ilkay Gundogan ayaa kubad hal iyo lab ah la wadaagay Kevin de Bruyne ka hor inta uusan baacsan goolka Crystal Palace, balse geesta ayey martay. Wuxuuna isla daqiiqadan Guardiola kaydka uga yeedhay xidiga uu kalsoonida badan siiyay ee Raheem Sterling isaga oo ciyaarta ka saaray İlkay Gündoğan.
Daqiiqadii 61-aad: Sergio Aguero ayaa sameeyay isku day markii uu madaxeeyay kubad uu dhinaca kasoo dhigay Bernardo Silva, balse goolhaye Hennessey ayaa ku dhagay.
Daqiiqadii 62-aad: Hennessey ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah, Sterlin ayaa kubad dhigay meel halis ah, Leroy Sane ayaa kubad awood leh goolka ku tuuray, balse looma ogolaan inuu shabaqa dhex dhigo.
Daqiiqadii 68-aad: Kevin de Bruyne ayaa laba ciyaartoy kubad uga guuleystay, ka hor inta uusan kubad awood leh goolka aadin, waxaase ka diiday Hennessey oo kubadda ku dhagay.
Manchester City ayaa awoodeeda iskugu gaysay sidii ay goolka Crystal Palace ku gaadhi lahayd wuxuuna Guardiola daqiiqadii 81 aad kaydka uga yeedhay Yaya Toure isaga oo ciyaarta ka saaray Bernardo Silva waxaana la soo gaadhay waqti xaasaasi ah oo ay labada kooxoodba awooda ugu saraysa ku ciyaarayaan.
DAQIIQADII 86 AAD De Bruyne ayaa halis wayn abuuray laakiin kubbada uu u bixin lahaa Leroy Sane ayuu difaaca Crystal Palace ee Van Aanholt uu dhexda si cajiib ah u qabtay si uu kooxdiisa halis waqti xun ah uga badbaadiyo.
Goolhayaha kooxda Crystal Palace ee Wayne Hennessey ayaa shaqo cajiib ah kulankan ka qabtay isaga oo xaalada ku adkaynayay kooxda Guardiola oo wax walba u samaysay sidii ay goolka guusha u keensan lahayd balse sidoo kale goolhaye Ederson ayaa shaqo fiican u qabtay kooxdiisa City.
DAQIIQADII 91 AAD Manchester City ayuu wadnuhu hoos u go’ay kadib markii Crystal Palace lagu abaal mariyay rekoodhe waxaana guuldaradii ugu horaysay ee xili ciyaareedkan soo gaadha City ka xigtay in tuurista rekoodhaha uu dul taagnaa Luka Milivojevic laakiin goolhaye Ederson ayaa markale sameeyay badbaadin kooxdiisa qiimo wayn u lahayd wuxuuna beeniyay goolka ay guuldaro ku soo gaadhi kartay markii ugu horaysay xili cyaareedkan.
Waxay ahayd dhamaadkii ciyaarta, waxay ahayd waqti waali ah, waxay ahayd waqtigii xili ciyaareedka, waxaana waxaba qaatay goolhaye Ederson Moraes si uu Manchester City uga badbaadiyo rekoodhe ama gool ku laag xiligii dhimasadha ee dhamaadka ciyaarta lagu dhigay City. Goolhaye Ederson ayaa muujiyay sababta uu xili ciyaareedkan u yahay goolhayaha Premier league ugu fiican.
Dhamaadkii ciyaarta Manchester City ayuu walwal dheeraad ahi soo food saaray kadib markii uu dhaawac soo gaadhay Kevin De Bruyne kadib markii uu taakal xun kala kulmay Jason Puncheon oo isaga laftiisa uu dhaawac soo gaadhay.
Layaabka ciyaartan waxaa ka mid ahaa in Kevin De Bruyne iyo xidiga sababta dhaawiciisa lahaa ee Jason Puncheon isla hal mar garoonka laga wada dhex qaaday waxaana kulankan ku dhaawacmay afar ciyaartoy oo labada kooxood ka kala tirsan.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah iyada oo Crystal Palace noqotay kooxdii ugu horaysay ee Manchester City ka joojisay guulihii xidhiidha ahaa waxayan City lumisay fursad ay 17 dhibcood hogaanka uqu qaban kartay. Crystal Palace ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee Man City dhibco ka lumisay tan iyo bishii August markaas oo ay Everton ahayd kooxdii ugu horaysay uguna danbaysay ee xili ciyaareedkan Man City dhibco kula qaybsatay kulan Premier league ah.